Nke a bụ ihe karịrị afọ 25 nke Guillermo Del Toro! - iHorror
Home Akụkọ Ntụrụndụ ụjọ Nke a bụ ihe karịrị afọ 25 nke Guillermo Del Toro!
Nke a bụ ihe karịrị afọ 25 nke Guillermo Del Toro!
by Shaun Horton October 9, 2017
edere ya Shaun Horton October 9, 2017
E nwere ọtụtụ aha ndị Fans nke Horror maara dị ka ndị isi dị egwu, ndị edemede, na ndị na-emepụta ihe: Alfred Hitchcock, Wes Craven, George Romero. Afọ iri, iri abụọ, iri atọ site ugbu a, ha ga-ekwukwa banyere ndị dị ka James Wan, Eli Roth, na N'ezie, Guillermo Del Toro.
Amụrụ na October 9th, 1964 na Guadalajara, Jalisco, Mexico, Del Toro bịara nwee mmasị na ịme ihe nkiri ma rụọ ọrụ na ya kemgbe ahụ. Mbepu mbu ya bu Cronos na 1993, ewepụtara ya izizi na Mexico tupu ịgbasa mba ụwa. Ihe nkiri egwu a, nke kpụrụ Frederico Luppi na Ron Perlman, nwetara nnukwu onyinye iri abụọ na abụọ.
Ihe nkiri ya ọzọ bụ nzọụkwụ mbụ ya na Hollywood na 1997 Mimic, nke, ọ bụ ezie na ọ bụghị flop n'ụzọ ọ bụla, abụghị ihe onye ọ bụla ga-akpọ blockbuster. MimicNnabata, yana ụfọdụ enweghị obi ụtọ n'ụzọ Hollywood si agba ihe, kpaliri Guillermo Del Toro ịlaghachi Mexico wee chọta ụlọ ọrụ mmepụta nke ya, nke mepụtara 2001 si Ndabere Ekwensu, ihe ịga nke ọma ọzọ. O laghachiri na Hollywood ma buru oru nduzi Nda 2, na-enye ndị na-ege ntị n'ozuzu America ụtọ mbụ ha nke Del Toro Brand.
Image site n'enyemaka nke tasteofcinema.com
Kemgbe ahụ, Guillermo Del Toro aghọwo aha nke egwu dị egwu, na-eme ụdị ihe nkiri dị ka Hellboy na ọ bụ ịga n'ihu, Labyrin nke Pan, na Pacific rim. O dekwara ihe ngosi ihuenyo nke afọ 2010 Atụla egwu n’ọchịchịrị, Ihe omume egwuregwu Hobbit, Nnukwu Crimson, na ọsọ dum nke Mgbu na TV.
Ka ọ dị ugbu a, ọ na-arụ ọrụ ịgbasa echiche dị egwu ya na akụkọ mgbe ochie Pinocchio, yana usoro telivishọn ọhụrụ akpọrọ Carnival Row.
Ma ihe nkiri abughi ihe niile ọ na-arụ ọrụ na ya. Na mbido afọ a ọ sonyere Patron iji mepụta Tequila pụrụ iche dabere na obodo ya.
Image site n'enyemaka nke foodandwine.com
Ya mere, bulie iko na Guillermo Del Toro na ọtụtụ afọ karịa nke ya na ụwa na-ekerịta ọhụụ ya gbagọrọ agbagọ, nke dị ntakịrị!
Site n'ikike nke syfy.com
guillermo del toroGuillermo Del Toro fimHellboyOnye nduzi ụjọPacific rimachịcha labyrinthNdabere Ekwensu
Shaun Horton bụ onye edemede nke akwụkwọ akụkọ sci-fi / egwu Hannah na Class 5, yana egwu egwu Cenote. Ọ na-ede site na ọmarịcha ugwu ugwu ugwu ọdịda anyanwụ, kpachiri n'etiti obodo Seattle na ọhịa nke National National Olympic. Ọ bụ onye na-akwado ndụ nke Horror, na-amalite site n'ịhụ Gremlins na 4 afọ. Ọtụtụ afọ ka e mesịrị, ọ chọpụtara ọrụ nke Stephen King, na-edebe onwe ya n'abalị na-agụ tome nke bụ IT. Kemgbe ahụ, ọ gara n'ihu na-agbasawanye mmasị site n'aka ndị edemede dị ka Dean Koontz, ihe nkiri dịka Nightmare na Elm Street na Alien, na usoro egwuregwu vidiyo nke Dead Space na Resident Evil.
'Fraịdee nke 13' onye na-eme ihe nkiri na-ekpughe Weinstein Harassment
31 Egwu Ntanetị abalị: Ọktoba 9th “Ugoloọma”